MAQAAL:-Dabaal Deggii Itoobiya Ee Garowe Iyo Dowrka Culimada | Voice Of Somalia
MAQAAL:-Dabaal Deggii Itoobiya Ee Garowe Iyo Dowrka Culimada
Posted on May 31, 2016 by Voice Of Somalia Image
Inkastoo Itoobiya fara galin iyo gumeysi ku heyso wadanka oo dhan, ayaa waxaa haddana jira tallaabooyin dheeri ah oo ay u qaadday qaar kamid ah gobolada wadanka oo ay kamid yihiin, Puntland iyo Muqdisho.
Gobollada qaar waxay ka sameysay bandhigyo ay ku muujineyso iney iyada hoos yimaadaan, sidaa darteed waxaan isku dayi doonaa in aan sameeyo qormooyin aan mid mid ugu eegayo oo ay ugu horeyso middan aan uga hadlayo Puntland.
Magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal, waxaa 27-kii bishan lagu qabtay xaflad loogu dabaal dagayay 25-sano guuradii kasoo wareegatay markii ay xilalka ku kala wareegeen Mingiste iyo Milles, oo labaduba ahaa kuwii ummada Soomaaliyeed kala gaabshay.
Xafladda ayaa waxaa si wada jir ah uga qeyb galay dadka Itoobiyaanka ah ee sannadihii lasoo dhaafay lagu beerayay Puntland iyo qaar kamid ah kuwa Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Garowe waxaana hor boodayay saraakiil katirsan maamulka ‘Puntland’.
Sawirada laga soo qaaday goobta ayaa waxay muujinayaan muuqaalo uu qofka muslimka aad uga murgoodo, oo aan ka xusi karo in dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee ka qeyb galay loo qeybiyay calanka gumeystaha Itoobiya.
Muxuu Yahay Fasirka Dhabta Ah Ee Arriintan?
Runtii wixii ka dhacay magaalada Garowe, ma ahan wax la dhayalsan karayo, marka kowaad haddaan si dhab ahaan ah u qeyxo, waxaa lagu xusay laba Gaal oo ummada Soomaaliyeed dhib weyn u geystay.
Mingiste waa ninkii ummada Soomaaliyeed ku tilmaamay dad aan dal lahayn oo reer guuraa ah, sidoo kale waa ninkii aynu isaga iyo ciidankiisii la galnay dagaalkii qaraaraa 1977-dii.
Mingiste, waa gaalkii markii uu ku fashilmay qabsahada Soomaaliya soo diyaariyay qorshihii lagu dumiyay dowladdii Maxamad Siyaad Barre, waxaan xusuusanaa in sannadkii 1982-dii ay degmooyinka Balanballe iyo Galdogob Calanka Itoobiya ka taageen ciidamadii Mingiste oo loo soo galiyay dharka jabhaddii SSDF, kuwaasoo ay hor kacayeen saraakiil Amxaaro kalkaal ah.
Milles isaguna kasii daran, waa ninkii Soomaali galbeed oo dhan hoos geeyay gumeysigooda, waa kii caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed ku xasuuqay magaalada Muqdisho islamarkaana laga hayo hadalkii taariikhiga ee ahaa “Annaga ma rabno dowlad Soomaaliyeed, balse waxaan rabnaa shacab Soomaaliyeed”.
Haddaba nasiib darro waxaan maanta nool nahay xilli magaalada Garowe ee dalka Soomaaliya laga xuso nimankaasi cadawga ah ee dakanooyinka lama illaawaanka ah inaga galay.
Madaxdii Xabashida iyo kuwii Puntland ee meesha wada fadhiyay ayaa si ay dadka u marin habaabiyaan sheegay in loo dabaal dagayo markii ay qowmiyadaha Itoobiya iska rideen Mingiste. Haddaba haddii tooda loo raaco, Puntland ma qowmiyad Itoobiyaan baa? Maxaase ka quseeya.
Tan kale haddiiba ay sidaa dhacday oo la yiri’ waxaan ku faraxsan nahay dhicitaankii Mingiste, sow micnaheedu ma ahan Milles oo kursiga ka tuuray ayaa fiicnaa!.
Calanka Lagu Ruxay Garowe
Calanku sidiisaba waa astaan qaran oo ay ummad walbaahi ku muujiso jiritaankeeda, heybaddeeda iyo summadeeda gaarka ah, sidaa darteed qolo walbaahi ma ogola wax kale iska daaye, in xitaa uu calankeedu dhulka ku dhoco.
Haddaan tusaale usoo qaadano calanka muslimiinta ee astaanta u ahaa Nabigeena Muxamad صلى الله عليه وسلم waxaa darti u shahiiday dad badan oo muslimiin ah laga soo billaabo Saxaabada رضي الله عنهمillaa maanta.
Sida aan siirada ku aragnay, saxaabiga Jacfar Bin Abii Daalib رضي الله عنهayaa isagoo ku jira dagaalkii Mu’ta loo dilay raayada darteed, si aysan dhulka ugu dhicin ayuu gacantiisa midig ku qabtay kadibna waa laga jaray, haddana bidix ayuu ku qabtay, iyadiina waa laga gooyay, intaas kumaanu ekeyn dadaalkiisa’e, wuxuu mar sadaxaad ku qabtay xabadkiisa illaa ugu dambeyntii uu halkaasi ku Shahiiday Allaah ka raadi noqdo’e.
Islaamka xagiisa Calanku waa sidaa, Gaalada iyo dowladaha iyaga ku daaban ee islaamka u nasab sheegtana, aad bey astaamahooda u qadariyaan haba ku kala duwanaadeene, waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa, sida ay dowladba midda ay colaada kala dhaxayso u gubto calankeeda.
Dalkeena Soomaaliya haddaan tusaale usoo qaato, waxaa jira in calanka Buluuga ah dartii ay dad u dhinteen, kuwaasi oo sida taariikhdu xuseyso uu ugu horeeyo askarigii loogu magac daray Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho.
Arrintan ayaa dhacday 1964-tii kadib marii ay ciidamo Itoobiyaan ah soo weerareen askartii Soomaaliya ee joogay Tog-wajaale oo dhacda xuduud beenaadka markaasoo ay ciidamadii Soomaalida xeelad uga gurteen fariisinkoodii, balse Xalane oo arkay in Xabashidu ku socdaan xerada oo uu calanka ka babanayay ayaa go’aansaday inuu difaaco illaa uu gurmad ka helo isagoo dhaawac ah iyo calanka oo aanan dhulka dhicin, kadibna uu geeriyoodo, waana midda keentay in dugsigii tababarka loogu magac daro.
Haddaba, ujeedada aan ugu dheeraaday Calanka ayaa ah inaan ogaano ayniga xafladdii ka dhacday Garowe oo dadkii Soomaaliyeed ee joogay loogu dhiibay Calanka Nasaarada Itoobiya.
Hadafku wuxuu yahay in Itoobiya doonesay iney Soomaali inteeda kale u bidhaamiso in la Itoobiyaaneeyay magaalada Garowe, iyadoo uu madasha ku sugnaa C/xakiim Camey oo ah ku xigeenka Cabdiwali Gaas.
Hogaamiyaha Puntland ayaa sannadihii u dambeeyay muujinayay astaamo arrimahan ka marqaati kacaya, kadib markii uu noqday ninka ugu safridda badan magaalada Adis-ababa, marka loo eego madaxweyne Killinyada isaga lamidka ah sida:-Xassan Sheekh, Siilaanyo, Shariif Sakiin, Axmad Madoobe iyo Guuleed.
Ummad walba oo ay soo wajahdo mid lamid ah xaaladda ka taagan Soomaaliya, waxaa Alle kadib badbaadin jiray culimada diinta Islaamka, kuwaasoo kasoo bixi jiray mas’uuliyadda uu Allaah ka saaray diintooda iyo dadkooda Muslimiinta ah.
Maanta, waxaan arkaa inta badan Culimadii Soomaaliyeed iney gabeen dowrkoodii ahaa jihaadka, faridda munkarka iyo reebidda xumaha, iyagoo taa badalkeeda ku mashquulay maslaxadahooda gaarka ah.
Markaan si gaar ah u eegno Puntland, waxaa ku nool Culimo badan oo isku tiriya iney kamid yihiin kuwa ugu aqoonta badan dalka, saasoo ay tahayna wali maanan arag hal Sheekh oo ka hadlay wixii ka dhacay magaalada Garowe. .أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ
Culimadaas oo u badan kuwa la yiraahdo ICTISAAM ayaa waxay ku caan bexeen iney dhaleeceeyaan dadka jihaadaya ee ay gaalada is hayaan, halka aad arkeyso ineysan kalimad ka oranayn fisqiga iyo gunnimada hareerahooda ka dhacaysa.
Marka aan sidan u tilmaamayo sifaadka xun ee wadaadahan, micnaheedu ma ahan inaan hadda uun arkay dhaqankooda, balse waxay ummada Soomaaliyeed oo dhan ka wada dharagsan tahay iney yihiin, kuwii Fatwooday in Soomaali galbeed la hoos geeyo gumeysiga Itoobiya,Sidaa darteed lagama sugayo wax aan ahayn iney haddana Fatwoodaan in Puntland la hoos geeyo Itoobiya.
Meelaha ugu badan ee uu gumeystuhu ka sameystay wadaad xumayaasha ayaa waxaa kamid ah Somaliland, Puntland iyo Muqdisho, hase ahaatee Hargeysa waxaa wax ka jooga culimo rabbaaniyiin ah oo ka cod dheer kuwa gumeysi kalkaalada ah, Muqdisho iyo Garowese kuma arkin culimo xaqa la jahra oo ummada u bidhaamiya wadaad xumayaasha iyo gumeysiga.
Halkan waxaan baaq uga dirayaa ummada Soomaaliyeed meel walboo ay joogto, walaalayaal wadanku wuxuu kasii dhacayaa haadaan, wuxuu halis ugu jiraa inuu galo gacan ka daran midda Yahuuda ee Falastiin qabsatay, maanta waxaa jirta fursad dalka lagu badbaadin karayo, taasoo ay macquul tahay inaan barri la helin, sidaa darteed waxaan ku talinayaa in diinta iyo dalka dhiig loo huro.
Waajibaadka uu Allaah ina saaray waxaa kamid ah, in aan difaacano diinteena, dalkeena iyo dadkeena intaba, haddaan waajibkaas u dhaqaaqno waxaan noqoneynaa dad xaq u dirir ah oo aanan laga guuleysan, walaalayaal fadhiga aan ka kacno.
Dhallinyarada Soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaan u sheegayaa iney ogaadaan ineysan jirin cid dalka u maqan oo aan iyaga ahayn, dal walba waxaa badbaadiya dhallinyaradiisa ee aan iska dul qaadno Xabashida, Kenyaatiga, Ugandeska, Burundiga iyo kuwa kalkaalayaasha u ah sida:- Hiil GUMEYSI (Jabuuti).
Sida sunnada ah ee uu Nabigeena scw inoo sheegay, dadka muslimiinta laga weyn maayo cid xaqa ku taagan oo gaalada la dagaalanta, waxaana dhici doonta in mustaqbalka la sheekeysto, dadkuna u qeybsamaan kuwa taariikh fiican gala iyo qaar meel mugdi ah ku qorma, waa inaan maanta beel beel iyo qof qof uga fakarnaa halka aan ka fariisaneyno taariikhda qormeysa ee Soomaaliya.
WQ: Warfaa Kheyr-doon.
Gaadiidka AMISOM oo dardaray Sargaal ka tirsanaa Booliska Xamar!
Calanka Ethiopia Kiniisadda Orthodox ayuu ka Turjumayaaye adigoo og Birta Sur ama Salaan